“Cidina Naguma Matasho Biyaha Bada-cas, Ma nihiin Qolo ku baqanaysa cidbaa xoog weyn, iyo Taangibuu wataa”Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. | Mandheera News
“Cidina Naguma Matasho Biyaha Bada-cas, Ma nihiin Qolo ku baqanaysa cidbaa xoog weyn, iyo Taangibuu wataa”Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Hargeysa(Mandheeranews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka Hadlay Ciidamo la sheegay dawlo isu-tagay inay doonayaan in Ciidamo ka sameeyan Biyaha Bada Cas oo ay leedahay Jamhuuriyadda Somaliland.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaayey Xaflad loo qabtay duf-cadii 32 ee Ciidamada Booliska iyo Milateriga oo Maanta ka qalin-jebiyey dugsiga tabobarka ee Mandheera, ayaa sheegay in aanay Somaliland marnaba aqbalayn Ciidamo aan laga talo-gelin, isla markaana amniga Bada iyo beriga Somaliland ay ku filan tahay.
Madaxweynaha oo arimaha si Diblumaasiyadeed uga hadlaya, waxa uu yidhi.
“Cidna ka yeeli mayno wax qaranimadayada wax u dhimaya, cidina naguma matasho Biyaha Bada-cas, Dawladaha yidhi, Bada-cas ayaan u Samaynayaa Ciidan difaaca, ee Magacyaasha badan ee 8-da dawladood ah. Waxaan u sheegaynaa in Bada iyo berigayaga anagaa diffaacana, cid aan nalagala tashan, iman mayso kana yeeli-mayno.
Ma nihiin qolo ku baqanaysa cidbaa xoog weyn, iyo Taangibuu wataa midna ma aaminsanin. Hore ayaanu Taangiyo ugu furanay qori. Nin wal oo xoog-weyn, nabad iyo Walaalnimo ayaanu ku haynaa”
Weriye Cabdicasiis Bashiir Nuur